संसारमै नभएको सीसीडी हटाउनुपर्छ - Karobar National Economic Daily
संसारमै नभएको सीसीडी हटाउनुपर्छ
query_builderJuly 17, 2017 9:21 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility9204
ज्ञानेन्द्र ढुंगाना उपाध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संंघ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल बंगलादेश बैंक
बैंक अफ काठमाण्डूबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले अहिले नेपाल बंगलादेश बैंकको नेतृत्व सम्हालेका छन् । वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा आधा दशक बिताएका ढुंगाना पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रमा सक्रिय छन् । उनी नेपाल बैंकर्स संघको उपाध्यक्ष पनि हुन् ।
प्रमुख कार्यकारी भएको पाँच वर्षको अवधिमा १८ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा भएको संस्थालाई सुधार गरी वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी बैंकका रूपमा नेपाल बंगलादेश बैंकलाई स्थापित गराउन सफल भएका छन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी गरेका ढुंगानाले अस्टे«लियाबाट वित्तीय विश्लेषणमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । बजेटले लिएका उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउने भए पनि हालको अवस्थामा निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार नगर्दा चुनौतीपूर्ण रहेको उनको तर्क छ ।
हाल वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको कर्जायोग्य पुँजीको अभाव र विगतमा देखिएको तरलता अभावको समस्या दोहोरिएको हुनाले यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उनी बताउँछन् । वित्तीय प्रणालीमा बारम्बार देखिने समस्या समाधान गर्ने गरी नीतिगत तवरबाटै सोच्नुपर्ने बताउने ढुंगानासँग समग्र बैंकिङ क्षेत्रको अवसर र चुनौतीका विषयमा कारोबारले गरेको कुराकानी :
तपाईंहरूले अपेक्षा गरेअनुसारको मौद्रिक नीति आएन । अब कसरी अघि बढ्ने योजनामा हुनुन्छ ?
बैंकर्स एसोसिएसनमार्फत दिएका सुझावमा कतिपय समेटिएका छन् भने कति समेटिएका छैनन् । बैंकहरूले दिएको सुझाव सबै आउनुपर्छ भन्ने पनि होइन । केन्द्रीय बैंकले नीति बनाउँदा बजारको अवस्थाअनुसार निर्णय गर्ने हो । बैंकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाहमा चुनौती रहेको बताउँदै आएकाले प्रत्यक्ष रूपमा २ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था फिर्ता गरेको छ ।
त्यसका साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिताका क्षेत्र भनेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि व्याख्या गरेर केही थपेको पनि छ । तर, केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात गणनामा दिएको सुविधा फिर्ता गरेको छ । सीमा नाघेका बैंकहरूलाई चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको अवधि दिएको छ । त्यसपछि पनि बजारको अवस्थाअनुसार गर्ने केन्द्रीय बैंकले हामीलाई आश्वासन दिएको छ । हाल वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप नबढेको खण्डमा कर्जा नियन्त्रणको अवस्था रहने देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रलाई २० प्रतिशत कर्जा प्रवाहको सीमा दिएको छ । यसले औसतमा ७.२ को आर्थिक वृद्धि सम्भव देखिए पनि कर्जामैत्री नभएकाले गाह«ो छ । अटो कर्जामा केही खुकुलो नीति लिएको भए पनि ग्रोसमा कर्जा बढ्न गाह«ो छ । त्यसका साथै संस्थागत निक्षेप घटाउन भनेकाले कर्जा प्रवाह अझै संकुचन हुन सक्ने देखिन्छ । वित्तीय प्रणालीमा नयाँ निक्षेप आएको छैन ।
संस्थागत निक्षेप पनि घटाउनुपर्ने भएकाले कर्जा प्रवाहमा समस्या हुन्छ । साथै मौद्रिक नीतिले कृषिक्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा भनेको छ । जुन निकै चुनौतीपूर्ण छ । कृषिका लागि कर्जाको माग नै हुँदैन । आगामी दिनमा कृषिका लागि भायबल प्रोजेक्ट आएर कर्जाको माग बढेको खण्डमा मात्र सम्भव हुन्छ ।
हालको अवस्थामा बैंकहरूले निक्षेप बढाउनुपर्ने दबाब छ । बैंकहरूले नयाँ निक्षेप खोज्न भन्दा पनि ब्याजदर वृद्धि गरेर एक संस्थाको अर्कोले तान्ने काम भइरहेको छ । यसले ब्याजदर अनावश्यक रूपमा बढाउने भयो नि ?
वित्तीय प्रणालीमा बारम्बार आउने समस्या समाधानका लागि नीतिगत रूपमै सम्बोधन गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नु जरुरी छ । कुरा रह्यो, कर्जा लगानीयोग्य पुँजीका लागि निक्षेप बढाउनुपर्ने । यस सन्दर्भमा डिपोजिटको बास्केट त एउटै छ । त्यसमा प्लेअर धेरै छन् । यो समस्या समाधानका लागि निक्षेप नै बढ्नुपर्छ । हामीले ब्याजदरका कारणले हो कि भनेर बढाएर हे¥यौं । त्यो होइन रहेछ ।
वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप आउनका लागि सरकारी खर्च बढ्नु तथा ‘मनी इन सर्कुलेसन’ बढ्नुपर्छ । चुनावपछि वित्तीय प्रणालीको समस्यामा सुधार हुने अपेक्षा थियो । तर, सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । यो समस्या तत्काल समाधान नभै अझै पाँच–छ महिना लाग्न सक्छ ।
वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढ्नका लागि अझै पाँच–छ महिना लाग्न सक्छ भन्नुभयो । यो अवस्थामा कसरी चल्ने भन्ने तयारी बैंकहरूले गरेका होलान् नि ?
वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप वृद्धि भएन भने कर्जा प्रवाहलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । पहिला कर्जा वृद्धि ३० भन्दा माथि र निक्षेपको वृद्धि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदा समस्या आएको हो । निक्षेप वृद्धि नभएपछि कर्जा वृद्धिदरलाई कम गर्नुपर्छ ।
अर्को उपाय भनेको ‘प्रुडेन्सियल नम्स’लाई सुधार गरेको खण्डमा पनि सहज हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले दिएको सीसीडी गणनामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ५० प्रतिशत र विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको कर्जा गणना गर्न नपर्ने सुविधा पनि गत असार मसान्तसम्मका लागि मात्र भएकाले बैंकहरूले लगानी गरेको अवस्था छैन । सीसीडी तथा सीडी रेसियो भन्ने संसारमै नभएको हामीकहाँ मात्र छ ।
कर्जा निक्षेप अनुपात ८० कायम गर्नुपर्ने भएकाले प्रशस्त तरलता हुँदा पनि लगानी गर्न सकेनौं । तरलता नियन्त्रण गर्ने आफ्नै संयन्त्र छन् । जस्तो वैधानिक तरलता अनुपात, नगद सञ्चिति अनुपातमार्फत नियन्त्रण गर्दा राम्रो हुन्छ । बासेल ३ मा तरलता करभरेज रेसियोलगायत अन्य कुराले पनि नियन्त्रण गर्छ । हाल ८ अर्बको बैंकले २० प्रतिशत रकम आइडल राख्दा करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हुन्छ । साथै, निक्षेप र पुँजीको २० प्रतिशत राख्नु भनेको एउटा बैंकका लागि २५ प्रतिशत आइडियल पुँजी बस्नु हो ।
यसले त ठूलो रकम लगानी गर्न नपाइने अवस्था हुने भयो । त्यसैले पैसा छ तर लगानी गर्न सकिएन भनेको हो । यसले बैंकहरूको कस्ट मात्र बढाउँछ । बैंकहरूको औसत निक्षेप कस्ट ८ प्रतिशतसम्म पर्छ । तर, त्यो तरलता व्यवस्थापनका लागि राखेको रकमले गर्ने आम्दानी भनेको १ प्रतिशतको हाराहारीमा हो ।
यसको असर सामान्य कर्जामा पर्छ, जसले गर्दा ब्याजदर बढ्न जान्छ । यो विषयलाई केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिएको खण्डमा समाधान सहज हुन्छ । हालको समस्या समाधानका लागि वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढाउनुप¥यो । त्यसले नभएको खण्डमा कर्जाको वृद्धिदर कम गर्नुप¥यो । त्यसले पनि समस्या समाधान भएन भने प्रुडेन्सियल बैंकिङ नम्सहरू नेपाल सुहाउँदो गरेर समसामयिक बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
बासेल–३ ले क्यापिटल एडेक्वेसी रेसियो ८ प्रतिशत कायम गरेको छ । हाम्रो जस्तो जोखिम धेरै भएको देशमा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट केन्द्रीय बैंकले पहिले नै धेरै राख्न भनेको छ । बैंकरले नदेखेका जोखिमहरू पनि हुन्छ भनेर केन्द्रीय बैंकले हुनुपर्ने भन्दा धेरै व्यवस्था गरेकोे छ । त्यसैले सबैतिरबाट बैंकहरूलाई मात्र मार पर्नुभएन ।
बजेटले तोकेको आर्थिक वृद्धिदर ७.२ को लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कर्जा वृद्धिदर बढाउनुपर्ने होइन र ?
केन्द्रीय बैंकले प्रुडेन्सियल नम्सलाई सुधार गरेर समसामयिक नबनाएको खण्डमा निक्षेप बढेन भने कर्जा वृद्धिदर कम गर्नुपर्छ । तर, त्यो गर्नेबित्तिकै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गाह«ो हुन्छ । त्यो अवस्था आउन नदिन केन्द्रीय बैंकले मनि इन सर्कुलेसन तथा कर्जाको विस्तारलाई के गर्नुपर्छ भनेर गर्नुपर्छ । बजेटले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले नगद सञ्चिति अनुपात घटाई सीसीडी हटाएको भए सफल हुन्थ्यो ।
सरकारले खर्च गर्न नसकेको रकम बैंकहरूलाई पुनर्कर्जाका रूपमा माग्नुभएको थियो । त्यो कसरी हुन सक्छ ?
हामीले त्यो त्यसै भनेको होइन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यस्ता अभ्यासहरू भएका छन् । केही देशमा यसको व्यवस्था छ । यो विषयमा सरकार पनि सकरात्मक भएको हो । तर, सरकारी खर्च गर्ने सन्दर्भमा केही सीमित बैंकलाई मात्र अधिकार छ । त्यसका साथै कुन मोडालिटीमा सरकारले खर्च गर्ने भन्नेमा अन्योल भएकाले टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । आगामी दिनमा यसको पनि व्यवस्था हुन सक्ला ।
सरकारले समयमा खर्च गरेको खण्डमा यो चाहिँदैन । यो आर्थिक वर्षदेखि सरकारी खर्चको अवस्था पनि बढ्ला । स्थानीय स्तरमा प्रत्यक्ष बजेट दिने भन्ने छ । त्यसले गर्दा सरकारको खर्च पनि बढ्ला । तर, पहिले जस्तो पैसा गएर सरकारी धुकुटीमा थन्कने क्रम रह्यो भने आर्थिक संकुचन नै ल्याउँछ । सरकारले खर्च गर्ने मोडालिटी भने परिवर्तन गर्नु नै पर्छ ।
तपाईं सीसीडी हटाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ । तर, यो विषयमा सीसीडी हटायो भने समस्या आउँछ भन्ने पनि छन् नि ?
हालको सीसीडी रेसियो हटाए बैंकहरूले सडकमा लगेर पैसा बढ्ने त होइन । यो विषयमा नीति निर्माण तहमा बस्ने व्यक्तिले बुझ्न नचाहेका हुन् भन्ने लाग्छ । बैंकिङ क्षेत्र पनि त परिपक्व भइसकेको छ । निजी क्षेत्रको बैंकिङ अभ्यास सुरु भएको करिब ३५ वर्ष पुगेको छ ।
यो अवधिमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण पनि कडा भएको छ । कर्पोरेट गभर्नेन्सको पक्ष पनि बलियो भएको अवस्था छ । त्यसका साथै वित्तीय क्षेत्र पारदर्शी पनि छ । हिजोको दिन रियलस्टेट क्षेत्रमा धेरै कर्जा गएर समस्या आएको थियो । आजको केन्द्रीय बैंकले रियलस्टेट कर्जा देऊ भने पनि बैंकहरू दिँदैनन् ।
नेपाल बंगालादेशको वित्तीय अवस्था (रु.करोडमा)
२० प्रतिशत तरल सम्पत्तिको व्यवस्थापन हामी गर्छौं । त्यसका लागि वैधानिक तरलता अनुपात र नगद सञ्चिति अनुपात छ । यी दुईलगायतका अनुपातमार्फत २० प्रतिशत व्यवस्थापन गर्छौं, सीसीडी हटाइदेऊ भन्न खोजेको हो । तर, सीसीडी रेसियो हटाउने विषयमा भित्र–भित्र हुन्छ हुँदैन भन्दा पनि खुला छलफल गरौं । अर्थतन्त्रका लागि जे ठीक हुन्छ त्यही गरौंला । छलफल त हुन सक्छ नि ।
अहिले हामीले कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ । राजनीति स्थिरता भएसँगै लगानी अवसरहरू पनि बढ्छन् । स्थानीय चुनावपछि कर्जाको माग बढ्छ । यही समयमा कर्जा नियन्त्रण गर्नुपर्दा अन्य समस्या आउन सक्छ ।
बैंकहरूलाई पुँजी वृद्धिको दबाबका कारण यो समस्या आएको हो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गर्न नभनेको भए पनि बैंकहरू आफैंले बढाउनुपर्ने अवस्था आएको थियो । तपाईंले क्यापिटल एडेक्वेसीको नम्सअनुसार बिजनेस विस्तारका लागि पनि पुँजी वृद्धि आवश्यक थियो ।
नेपाल बंगलादेश बैंकको सन्दर्भमा नै कुरा गर्दा हकप्रद सेयर निष्कासन नगरेको भए कर्जा घटाउनुपर्ने अवस्था थियो । बैंकको क्यापिटल एडेक्वेसी १० बाट ११ पुग्थ्यो । सीमित पुँजीले सीमित बिजनेस हुन्छ । बैंकसँग जोडिएका हरेक पक्षको बिजनेस बढोस्, नाफा बढोस् भन्ने पनि हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले थोरै समयमा धेरै पुँजी बढाउन भन्यो होला ।
यसका लागि समय केही चाहिन्थ्यो । तर, पुँजी वृद्धि त आवश्यक नै थियो । सबै बैंकको पुँजी पुगेको छ । नपुगेका बैंकहरू पनि प्रक्रियामा छन् । पुँजी अझै बढाउने सन्दर्भमा यो क्रमिक प्रक्रिया हो । कहिले भन्ने कुरा हो । बैंकहरू आफंैले पुँजी बढाउँदै जान्छन् । यसमा केन्द्रीय बैंकले भनिरहन पर्छ जस्तो लाग्दैन ।
मनी इन सर्कुलेसन बढाउनुपर्ने बेला भएको हो ?
यस विषयमा बैंकरहरूको सोचाइ मनि इन सर्कुलेसन बढाउने भन्ने हो । तर, त्यसमा केन्द्रीय बैंकको पक्षबाट के हुन्छ ? यसका पनि स्ट्यान्डर्ड फर्मुलाहरू हुन्छन् । त्योअनुसार कति हुँदा कस्तो प्रभाव पर्छ, कति हुनुपर्ने हो भन्ने विषयलाई फलो गरेको होला । तर, त्यो फर्मुला पनि संशोधन गर्नुपर्ने समय भएको छ । नेपाल यो समस्या बारम्बार आइरहँदा यसको समाधान गर्नुपर्छ ।
यसले निक्षेप वढाउनुका साथै क्रेडिट क्रिएसन वृद्धि हुन्छ । मनी इन सर्कुलेसनले महँगी बढ्छ । हालको समयमा धेरै न्यून महँगी भएकाले पनि उपयुक्त समय हो । महँगी बढेको खण्डमा पनि विगतको जस्तो हँुदैन । केन्द्रीय बैंकले यसलाई पनि हेर्नुपर्ने पनि हो ।
विकास बैंकहरूले ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था आयो भनेका छन् । वाणिज्य बैंकको र विकास बैंकको ब्याजदर समान भएकाले बढाउनुपर्ने अवस्था आएको भनेका छन् नि ?
युनिर्भसल बैंकिङ कन्सेप्ट आएको छैन । हामी ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गअन्तर्गत नै काम गरिरहेका छांै । एउटा ग्राहक ‘क’ वर्गमा नगई ‘ख’ मा किन जान्छ अथवा ‘ख’ मा नगई ‘ग’ मा किन जान्छ भने वर्गअनुसारका सेवा–सुविधाहरू छन् । ती संस्थामा निक्षेपकर्ता जाने भनेको ब्याजदर बढी भएर वा अन्य सुविधा तथा सहजता भएर हो । वर्गअनुसार ब्याजदर धेरै छ ।
वाणिज्य बैंकमा ब्याजदर बढेपछि विकास बैंकको पनि बढ्छ नै । ‘क’ र ‘घ’ वर्ग चाहिन्छ, तर ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको काम वाणिज्य बैंककै हो भने आवश्यक छैन । युनिभर्सल बैंकिङको कन्सेप्टमा आएको खण्डमा ‘क’ र ‘घ’ मात्र हुँदा राम्रो हुन्छ । त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकलाई नियमन गर्न पनि सहज हुन्छ ।
मर्जर तथा एक्युजिसनले के प्रभाव पारेको देख्नुहुन्छ ?
यसले राष्ट्र बैंकलाई नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सहज भएको छ । त्यसमा कर्मचारी जगत्मा खासै नकारात्मक असर परेको देखिँदैन । सानोतिनो असन्तुष्टि हुन सक्छ । तर, बेरोजगार नै भएको अवस्था छैन । यसले अर्थतन्त्रमा असर गरेको छैन । मर्जरमा गएका संस्थाहरूले व्यवस्थापनालाई चुस्त बनाउनु आवश्यक छ । नेपाल बंगलादेश बैंकको सन्दर्भमा ठूलो मर्जर अनुभव भने गरेका छैनौं ।
हिजोका दिनमा, नेपाल बंगलादेश बैंक खराब वित्तीय अवस्था भएको बैंक हो । आज यो बैंकको पोजिसन कहाँ पुगेको छ ?
हो, मैले यो बैंकको जिम्मेवारी लिँदा बैंकको वित्तीय अवस्था नराम्रो थियो । त्यो समयमा बैंकको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ घाटा तथा १८ प्रतिशत खराब कर्जा थियो । त्यो समयमा बैंकको ९ अर्ब कर्जा र ११ अर्बको हाराहारीमा निक्षेप थियो । कर्मचारीको मोरल धेरै तल गएको थियो । बैंक रहने÷नरहने भन्नेमै प्रश्न थियो । बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात पनि साढे ४ प्रतिशत मात्र थियो ।
पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा बैंकले अहिले करिब डेढ अर्ब नाफा गर्न सफल भएको छ । ६ सयभन्दा धेरै कर्मचारी छन् । बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात करिब १३.५ प्रतिशत छ । यो अवधिमा बैंकले करिब ४२ अर्ब निक्षेप संकलन गरी ३८ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको अवस्था छ । हामीसँग ननफन्डेड बिजनेस करिब ३० अर्बको छ । योसहित हाम्रो पोर्टफोलियो करिब ६८ अर्बको छ । यो हिसाबले शीर्ष १० बैंकभित्र हामी आइसकेका छौं ।
मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङलगायतका आधुनिक बैंक सेवा हामीले प्रदान गर्दै आएका छौं । नेपालमा पेमेन्ट गेटवे नभएकाले इन्टरनेट बेस सेवाहरू सीमित थिए । साथै, हाम्रो सफ्टवेयर पनि सीमित भएकाले पनि नयाँ सेवा विस्तारमा समस्या थियो । अब त्यो सुधार भैसकेको अवस्था छ । सेवामा आधुनिकता र ग्राहकमैत्री सेवाका लागि त निरन्तर हुने प्रक्रिया हो । यो परिवर्तनको कुरा भनेको चलिरहने प्रक्रिया भनेर बुझ्छु ।
बैंकको नयाँ योजना के छ ?
सबैभन्दा पहिला नेपाल बंगलादेश बैंकको नेटवर्क विस्तार गर्ने योजना छ । अरू बैंकहरूको मर्जरका कारण शाखा विस्तार भएको छ । हामी मर्जरमा पनि गएनौं । बैंकको ग्रोथको कुरामा पनि नेचुरल रूपमा अघि बढ्यौं ।
स्थानीय स्तरमा बैंकका शाखा खोल्ने कुरालाई धेरै बैंकले बाध्यताका रूपमा लिएका होलान् । तर, मैले अवसरका रूपमा लिएको छु । यसले पनि नेटवर्क विस्तारमा सहयोग गर्छ ।
हामी बैंकिङ प्रोडक्टलाई आधुनिकीकरण गर्ने र विविधीकरण गर्ने पक्षमा छौं । नयाँ सफ्टवेयर लिएपछि हामीले ग्राहकलाई सहज हुने सेवा प्रदान गर्नेछांै । आगामी दुई वर्ष हामी यी दुई कुरामा केन्द्रित हुन्छौं ।
बैंक मौद्रिक नीति नेपाल बंगलादेश बैंक बैंकर्स एसोसिएसन